तत्कालिन शासन व्यवस्थाले जनताको हित र विकासमा सधैं बाधा गर्ने र निमुखा जनताको सधैं शोषण गर्ने भन्दै तत्कालिन नेकपा माओवादीको कमाण्डर हुँदै हाल दोरम्बा गाँउपालिकाको अध्यक्ष बने कमान मोक्तान । गाँउपालिकाको अध्यक्ष मोक्तानसँग जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने कस्तो खालका योजना छन् ? के भाषणमा भनेको जस्तै जनताको आवश्यकता पुरा गर्न सजिलो छ ? के छ जनताको र दोरम्बाको समृद्धिको योजना ? न्यूज कारोबारको लागि संवाददाता सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
दोरम्बा गाँउपालिकाको अवस्था कस्तो छ ? – अहिले हामी निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको छ । बिषेशगरी यस आर्थिक वर्षमा बिनियोजन भएको बजेटको ७० प्रतिसत काम सम्पन्न भएको छ । गाँउपालिकाले गर्ने र बनाउने योजना र कार्यक्रम सकिएको छ । ठुला योजना जो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गर्ने योजना हामीले पठाइसकेका छौं ।
यो गाँउपालिका अन्य पालिकाभन्दा ऐतिहासिक र बिशिष्ट छ, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन कसरी हुन्छ ? – यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुबै हिसाबमा महत्वपूर्ण छ । त्यसको लागि हामीले दोरम्बालाई सहिदको नामबाट चिनाउनको लागि केही बजेट छुट्याएको छौं । दोरम्बामा २१ जनासहिद भएको छ, जसकोे गरिमा उँचो बनाउने गरी सहिदको नामबाट सहिद पार्क बनाउने योजना छ । अरु पालिकाको दृष्टिबाट भन्दा यो पर्यटकीय, भौगोलिक हिसाबमा उत्कृष्ट छ । यस क्षेत्र कृषिको पनि व्यापक सम्भावनाको क्षेत्र हो । पर्यटकीय र कृषि हव बनाउने योजनामा हामी लागिरहेका छौँ ।
दोरम्बा गाँउपालिका पर्यटकीय हिसाबमा धनि छ, प्राकृतिक सौन्दर्य, आर्थिक विकासमा कसरी सहयोगी बन्छ ? – दोरम्बा गाँउपालिकाभित्र रहेको पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरिसकेका छौँ । ति गन्तव्यहरुलाई छिट्टै नै पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने र विकास गर्ने काममा हामी लागिसकेका छौं । सुरुवाती चरणमा हामी अग्लेश्वरी, शैलुङ्ग, सानो सैलुङ्ग, गुरासे, बह्मबिष्णु, छाँगेश्वरी, बागढुँगा लगायत विभिन्न किसिमको गुम्बाहरुलाई संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा लाग्ने छौँ । यस क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग समेत आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका छौं । यि पर्यटकीय क्षेत्रभित्र गुणस्तरीय खालको होमस्टे सञ्चालनकको व्यवस्था पनि गर्छौ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी गाँउपालिकाको विकासमा दृढ भएर लाग्छौं ।
अहिले दोरम्बा गाँउपालीकाको आर्थिक स्रोत के के छन्, तपाईको कार्यकालमा नयाँ स्रोत के के निर्माण हुन्छ ? – अब अहिलेभन्दा त दोरम्बाको आर्थिक स्रोत जग्गाको करभन्दा बाहेक केही छैन । तर हामी आर्थिक स्रातको लागि अन्त कतै जान पनि त छैन, मात्र के हो भने हामीसँग रहेको भएको वस्तुको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो । नयाँको जुन प्रश्न छ, यसमा म के भन्छु भने नयाँ हैन भएको ति पुरानालाई नयाँ हिसाब र तरिकाले चलाउने हो । दोरम्बा गाँउपालिकामा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्ने, ढुंगाहरुको व्यवस्थापन गर्न क्रसर उद्योग खोल्ने, पर्यटन उद्योग खाल्ने, माटो सुहाउँदो कृषिको खेति गर्ने जस्तै अग्लेश्वरी गुँरासे शैलुग रेन्जलाई चिया खेतीको रुपमा विकास गर्ने लगायत कुरालाई कानूनी तथा व्यवहारिक रुपमा नयाँ ढंगले चलाउने हो । हामीसँग जलविद्युतको लागि पानीको अभाव छ । हामीले विकास गर्ने भनेको अन्य कुरामै हुन्छ ।
तपाईको कार्यकालमा दोरम्बाका युवाहरु आफ्नै घरमा खुशी भएर बस्ने वातावरण बन्छ ? – यो समस्या दोरम्बाको मात्र नभएर अहिले सिंगो देशकै हो । युवा जनशक्ति जो हाम्रो देश विकासको पहिलो शक्ति हो । निश्चय नै मैले यो जनशक्तिलाई दोरम्बाको विकासमा लगाउने छु । म यो त भन्दिन की सबै दोरम्बाको युवा स्वारोजगार हुन्छन्, तर कानूनीरुपमा युवा जनशक्तिलाई केन्द्रमा राखिन्छ भने व्यवहारिक रुपमा पनि प्रयास गरिन्छ । दोरम्बामा युवालाई सबै क्षेत्रमा जोडिने छ, मैले अघि जो विकासको क्षेत्रहरु भने ति सबै क्षेत्रमा विकासको लागि युवा शक्तिको पहिलो भूमिका हुन्छ ।
दोरम्बा गाँउपालिकाबाट युद्धमा सहिद, घाइते तथा वेपत्ता भएकाहरुका परिवारहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? – यो बिषयमा पार्टिको पहलमा राज्यले पनि केहि व्यवस्था गरेको छ । हामीले गाँउपालिकाको तर्फबाट उनीहरुलाई बिषेश व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यो के भनेजस्तो कृषिको पकेट क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुमा विषेश व्यवस्था गर्छौ । अब जो व्यवसाय गरेर वस्न चाहन्छन्, तिनीहरुको लागि पनि हामी कार्यक्रम ल्याउछौं । तर उहाँहरु तयार हुनुपर्छ अल्छी हुने र राज्यको सुविधा खाएर बस्ने सोंच त्याग्नुपर्छ ।
तपाईको कार्यकालमा यहाँका जनताको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ ? – गाउँपालिकाभित्रको योजना कस्तो हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भने । मुख्य त हामीले निर्वाहमुखी कामहरुलाई अब व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । भएको र रहेको स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु नै हो । गाँउपालिकाको तर्फबाट जनताको आर्थिक विकासको लागि विभिन्न किसिमको योजना ल्याउछौं । साँच्चै बेरोजगार युवाहरुको लागि बिषेश अनुदान ल्याउछौं, यस किसिमको योजनामा सबै सहभागी हुन पाउछन् । यो ढंगले अघि बढ्दा दोरम्बा र दोरम्बाको जनताको आर्थिक अवस्था राम्रै हुने आशा गरेको छु ।
कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन र बजारीकरण कसरी गर्नुहुन्छ ? – बजारीकरणको बेलामा नै हो कृषक ठगिने, हामीले पहिलो कुरा सडक बिस्तारमा ध्यान दिन्छौं, किन भने सडक भएपछि कृषक र उपभोक्ताको सिधा सम्र्पक हुन्छ । दोस्रो कुरा हामी कृषक तथा उपभोक्ता दुबैको लागि मूल्य निर्धारण गर्दछौं । जस्तो दोरम्बाको डडुवामा किबीको उत्पादन हुन्छ, त्यो कृषकले सिधा काठमाडौं लगेर आफै प्याकिग गरेर वेच्छ ।